Ho fanampiana an’i Volana… : hanolotra seho «Tolo-tanana » ny Singers of Jesus | NewsMada
Ho fanampiana an’i Volana… : hanolotra seho «Tolo-tanana » ny Singers of Jesus
Tratran’ny aretin’ny voa ka mila fanoloana tanteraka izany any ivelany i Volana. Hisy ny “Tolo-tanana”, seho hafanain’ny Singers of Jesus, ho fanampiana azy.
Volana, renim-pianakaviana iray, tojo aretina sarotra. Tratran’ny “insuffisance rénale chronique”, efa hatramin’ny taona 2009 izy, ary nihombo hatrany izany. Mahatsapa ny fahasahiranany ireo namana sy Havana, ka nanangana ny Association Solidarité Volana (ASV), mba hanampiana azy.
Ho tohin’ny hetsika efa natomboky ny fikambanana, hisy ny fampisehoana izay natao hanagonam-bola, hotontosaina ny alahady 21 mey izao, manomboka amin’ny 3 ora tolakandro, etsy amin’ny Dôme RTA. “Tolo-tanana” no lohanteniny, satria izay rahateo no tena antony.
Hanafana ny fotoana ny Singers of Jesus, tarika mpanao gospel anisan’ny malaza eto. Hivahiny amin’ny seho koa i Stéphan Rambl, Natiora (Kopi Kolé Hantatiana) ary Hugues Rakotomalala. Araka izany, hiara-dalana ny fiderana an-kira sy ny fanentanana ho amin’ny fifanohanan’ny samy mpiara-belona.
Mila vola 175 tapitrisa Ar
“Tsy misy afa-tsy roa sisa ny vaha olana amin’ny aretiny: na manohy ny “dialyse” na manao girefin’ny voa. Nahita hopitaly afaka mandray azy any New-Delhi any Inde izahay, ary efa voalamina avokoa ny momba ny fitsaboana fa ny vola sisa no tsy am-pelatanana. Mila 175 tapitrisa Ar ny fandidiana ka izay no hanaovanay antso avo”, hoy ny nambaran-dRanaivoson Mialy, fiohan’ny fikambanana ASV.
Nanomboka ny taona 2009 Razafintsaovina Vololoniaina, na i Volana no fantatra fa tatran’ity aretin’ny voa ity. Niitatra izany ny taona 2013, satria nisy fivontosana tao amin’ny voa ankavanana, ka voatery nalana tany Maorisy izany. Tsy miasa tsara intsony koa anefa ny voa ankavia, sa voatery mizaka “dialyse” in-droa isan-kerinandro izy. Ankoatra ny halafosany, mandreraka fo vetivety ny “dialyse” ka tratran’ny “anémie” na ny tsy fahampian-dra matetika koa izy.
“Raha jerena ety ivelany, toy ny rehetra ihany aho. Misy anefa ny tsy maintsy fadiako mafy, toy ny rano izay zara raha mahazo misotro sy ny sakafo. Tsy afaka mampiasa vatana be loatra intsony koa, kanefa na izany aza miasa ihany aho satria ilaina izany”, hoy kosa ny nambaran’i Volana, mikasika ny aretiny.
Izay fanantenana izay indrindra no tsy tian’ny namany ho very, ka manentana ireo afaka manampy eto sy any ivelany izy ireo. Ankoatra ny fandraisana anjara any amin’ny fampisehoana amin’ny alahady, misy koa ny fahafahana manampy amin’ny alalan’ny Mobile Money mankany amin’ ny laharana 034 11 389 26, 033 11 389 26 na 032 52 155 46.